Ku Bixi Warqad Cilmi baaris ah Somalia
Ma u baahan tahay caawimaad qoris xirfadeed? Ka hel warqad tayo sare leh Lacagta ugu Fiican ee Warqad Cilmi baaris ah Somalia ku qoran dhammaan heerarka tacliimeed.
Adeegga khadka tooska ah ee warqadda cilmi baarista
Markaad ka iibsatid warqad cilmi baaris khadka tooska ah, waad ku kalsoonaan kartaa inaad bixinayso oo keliya warqad tayo sare leh oo adiga ku qanci doonta. Tilmaamaha Sare ee Adeegga Fulinta Amarka. Ma jirto hubsiimo qirasho.
24 saacadood helitaanka adeegga macaamiisha. Dib u eegis aan xadidnayn oo lagu sameeyo shaqadaada. Sirta dammaanad qaadka ah Waqtiyada soo celinta degdegga ah ee amarrada.
* Xor ayaad u tahay inaad weydiiso su'aalo ku saabsan warqada iyo adeeg bixiyaha. Kuguma cadaadin doonaan inaad sameyso wax aadan rabin inaad sameyso. Warqadaadu waa masuuliyadaada.
* Waraaqaha oo dhami waxay ku damaanad qaadayaan luuqadaada. Tusaale ahaan, haddii ay tahay inaad ku qorto ereyga Faransiiska ama weedha, warqaddu waxay awoodi doontaa inay kuu turjunto dhibaato la'aan. Qaar ka mid ah bixiyeyaasha adeegga xitaa waxay ku siin karaan tarjumaad bilaash ah amarkaaga.
* Waraaqdaada waa la tafatiri karaa kahor rarka. Haddii aadan rabin in warqadda oo dhan la saxo, waxaad codsan kartaa qoraal ogeysiinaya iyaga. Taas ka dib, dib ugama laaban doonaan inay kuu saxaan.
* Qoraalo badan oo qorayaasha ayaa dib u akhrin doona warqadaada kahor intaadan dirin. Tani waa mid aad muhiim u ah. Qoraaga warqadu wuxuu hubin doonaa qaladaadka higgaadinta, khaladaadka naxwaha, iyo dhibaatooyinka dhismaha jumlada.
* Waxaad kuheli kartaa qoraagaaga warqad cadeeya isla maalintaas. Haddii aadan ku qanacsaneyn wax, maahan inaad waqti dheer sugto inta warqadda dib loo akhrinayo. Qoraaga warqadu wuxuu hubin doonaa in wax waliba sax yihiin kahor intaanay warqada kuu dirin. Waad weydiin kartaa su'aalo ku saabsan warqadda kahor intaadan saxiixin warqadda sidaa darteed uma baahnid inaad sugto illaa waqtiga kama-dambaysta ah.
* Qaar ka mid ah bixiyeyaasha adeegga ayaa waliba damaanad qaadaya in warqaddaada uusan qof kale khiyaanayn. Hadday taasi dhacdo, qof ayaa fiirin doona warqaddaada. si loo hubiyo inaysan jirin wax xatooyo ah.
* Haddii aad doorato adeeg khadka tooska ah ah, waxay warqaddaada toos ugu dirayaan madbacaddaada. Warqaddu waxay diyaar u noqon doontaa daabacaad intaadan ogaanin. Faa'iidooyinka badan ee adeegga khadka tooska ah, waxaad lacag ugu keydin doontaa daabacaadda maxaa yeelay way ka qiimo jaban tahay daabacaadda warqaddaada marka loo eego warqadda tirada badan lagu raray.
* Waraaqda waxaad kuheleysaa khadka tooska ah markasta oo aad ubaahantahay. Waad daabacan kartaa warqad markii aad u baahatid ka dibna isla markiiba waad isticmaali kartaa. halkii aad sugi lahayd dhowr maalmood si aad u hesho ka dib markii aad ka dalbatid warshadahaaga warqadda.
* Adiga oo warqad kuhelaya khadka tooska ah, waxaad u diri kartaa warqadaada wakhti kasta. oo dib ugu hesho 24 saac gudahood. Qaar ka mid ah warshadleyda waraaqaha waxay qaadan kartaa maalmo si ay u keenaan warqadda qaar badan oo iyaga ka mid ahna waxay u baahan yihiin inaad bixiso lacag dheeri ah oo rar ah
* Waraaqaha badankood waxaa loo diraa USPS si gurigaaga loogu geeyo. Haddii aad doorato qaabkan, waxaad hubin kartaa in warqaddaada lagu heli doono xaalad wanaagsan oo aan loo furin ama aan sinnaba loo beddelin.
* Waqtiyadii hore, waxay ahayd wax iska caadi ah in dadku warqadooda jarjaraan warshadhooda waraaqaha sameeya ayna ku sameeyaan isbadalo dhowr ah warqada. Si kastaba ha noqotee internetka, si kastaba ha noqotee, waxaa lagu siiyaa kantarool buuxa warqaddaada. mana aha inaad ka walwasho tan.
Markaad dalbato warqaddaada khadka tooska ah, waxaad xitaa codsan kartaa in warqadda uu saxeexo tifaftiraha. Uma baahnid inaad lacag siiso qof si uu u qoro warqaddaada ka dibna aad u akhrido.
Cilmi baaristaada waxaa lagu sameyn doonaa si dhakhso leh oo dhib yar. Waxaad ku badbaadin kartaa boqolaal doolar adoo adeegsanaya daabacadaha waraaqda internetka. Waxay leeyihiin wax kasta oo aad u baahan tahay si loo hubiyo in warqaddaadu ay kaamil tahay.
Dad badan ayaa ka shakisan dalbashada warqad cilmi baaris ah oo khadka tooska ah laga sameeyo. Faa'iidooyin badan ayaa ku jira doorashadan tan ugu weyna waa inaad ku dhammaysan karto hawsha gurigaaga. adiga oo aan waligaa ka bixin xafiiskaaga.
Markaad ku sameysid waraaqdaada cilmi-baarista khadka tooska ah, waxaad sidoo kale dalban kartaa warqaddaada inta jeer ee aad rabto. markasta oo aad u baahatid oo si toos ah loogu soo diro gurigaaga. Doorashadani waa mid aad u habboon.